नेपालीको औषत आय बढ्यो, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ? — KhabarTweet::Nepali online news portal नेपालीको औषत आय बढ्यो, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ? — KhabarTweet
नेपालीको औषत आय बढ्यो, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
काठमाडौं- पछिल्लो एक वर्षमा नेपालीको औसत आय झण्डै ९ हजार रुपैयाँले बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ अमेरिकी डलर अर्थात १ लाख २६ हजार ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो गएको आर्थिक वर्षकोभन्दा ८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँले धेरै हो । गएको आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार २ सय ६७ रुपैयाँ थियो । प्रतिव्यक्ति आय कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई आधार मानेर निकालिन्छ । यो वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
गएको वर्ष यो ३४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।